Horjooge Muuse Biixi oo ku faanay maatadii Laascaanood uu ku dhacay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Horjooge Muuse Biixi oo ku faanay maatadii Laascaanood uu ku dhacay
Horjooge Muuse Biixi ayaa ku faanay maatadii reer Koofur galbeed ee uu ku dhacay Laascaanood. Horjoogahan fikirku ku yaryahay qabyaaladuna dishootey ayaa eedayn aan jirin dusha uga tuuray gaalada Qaramada midoobey oo runtii iyaga lagu aqoon inay dad shiciba gacantooda ku saaraan inay ku dul shaqaystaan mooyee.
” Waa laga filaayay horjooge sidan fikirku ugu yaryahay inuu eeda saaro meelkale isagoo dadka uu dhacay ay yihiin Somali haddana leh gaalo may wax u tarto waa jaahilnimo cad ayuu yidhi Xuseen Warsame.
“Wuxuuba ku faanayaa in Butlaan iyagu dileen oo garaaceen reer Koofur Galbeed laakiin isagu dhacay keliya iyagoo qalfoofana gawaadhi ku gurey ayuu raaciyay Xuseen Warsame.
Xitaa hadalkiisa ma jirin cid u nacamlaysay oo sacabka u tuntey aan ka ahayn haween jufadiisa ah oo soo buuxiyay goobta oo uu ku amaanayay maleeshiyadii SNM ee burburisay Hargeysa iyo Burco qixisayna kumanaan ISAAQA dagaalkoodii lagu hoobtey ee 1988-1992-1994.